WINE 6.9 inosvika neiyo WPCAP Raibhurari yakashandurwa kuita PE | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.9 inosvika neiyo WPCAP Raibhurari yakashandurwa kuita PE uye zvinopfuura mazana matatu shanduko
Hapana kushamisika, senge mamwe maChishanu uye mushure v6.8, WineHQ yakaparura nyowani yekuvandudza vhezheni yesoftware nguva shoma yapfuura kumhanyisa Windows mafomu pane mamwe masisitimu anoshanda, uye izvo zvinouya zvinobatsira mune dzimwe nguva senge paunenge uchida gadza Guitar Pro paLinux. Izvo zvavakasunungura nhasi May 21 ndizvo WAINI 6.9, uye iko zvakare kuvhurwa kweanongoonekwa matatu matsva maficha, kune iyo inowedzerwa yakajairwa akati wandei kukanganisa kururamisa.
Izvo zvinoratidzwa neWineHQ mumabhuku ayo inongova chete iyo iceberg, kana kwete kunyange izvo. Pazasi, ndipo patinowana ruzivo rwese, ivo vanotaura kuti vakagadzirisa makumi maviri neshanu uye vakapinda yakazara 316 kuchinja. Kunyangwe hazvo vari vazhinji, vari pasi pe 359 yevhiki rapfuura uye vanopfuura mazana mana vaakambopinda. Pazasi iwe une iyo runyora rwemashoko kuti vabude pachena.
WINE 6.9 inosimbisa
WPCAP raibhurari yakashandurwa kuita PE.
Tsigiro yemafomu mapepa mune anodhinda anoparadza.
Mamwe math masvomhu kubva kuMusl munguva yekumhanya C.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.9 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.10, uye ichave ichinyatso svika inotevera Chishanu, Chikumi 4. Pakati pezvauchasuma, uchifunga kuti isu tichiri mune yekutanga vhezheni dzekuvandudza, chinhu chete chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.9 inosvika neiyo WPCAP Raibhurari yakashandurwa kuita PE uye zvinopfuura mazana matatu shanduko
Nezve hutsotsi paInternet. Makesi maviri ehupenyu chaihwo